ရေးသားသူ ညလင်းအိမ် at 10:46 PM
အားသစ်တွေနဲ့သွန်းလောင်း
ဒီကဗျာပိုဒ်လိုပဲ တစ်တန်း တိုးကြပါစို့ ....
ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ် မှတ်လည်း မှတ်သွားပါတယ် ငါ့ ညီ
မကြာမကြာရောက်ပေမယ့် mp3 sound track တွေရဲ့ (ဒေါင်းမလား) ဆိုတာတွေကို cancel လုပ်နေရတာနဲ့ နက်က ပြုတ်၂ကျသွားတယ်။ ကနေ့တော့ စိတ်ရှည် လက်ရှည် စောင့်ဝင်ပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးကို ကိုယ်တိုင်တိုက်ယူမှရသလို ပျော်ရွှင်မှု့ကိုလည်း ကိုယ်တိုင် လုပ်ယူမှသာ ရနိုင်မယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားပါပီ.။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို "ည" ရေ.။
“စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာရ အလှအပတခုပါပဲ”
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ရွှင်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ကျူးပြသပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
ကိုညကောင်းကင်ရေ..၂၀၁၀ မှာ မလွမ်းကြေးနော်..ပျော်ရွှင်မှူဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး ယူမှ ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံထားတယ်ရှင့်။ ကိုညကောင်းကင် ပျော်ရွှင်မှူ ပိုစ့်လေးရေးတော့ လွမ်းစရာတွေ ၂၀၀၉ မှာ ထားခဲ့လိုက်ပါ။ ၂၀၁၀မှာ ပျော်ရွှင်မှူတွေ တစ်ပွေ့တစ်ပိုက်ကြီးနဲ့ ကဗျာတွေ များများ ရေးနိုင်ပါစေ..
နှစ်သစ် ကို ကူးတော့ ပြောင်းတော့ မယ်ဆိုတော့ 
အဟောင်းထဲက မှားခဲ့လွဲခဲ့ဟောင်းခဲ့ တာတွေကို
အဟောင်းထဲမှာပဲ ထားခဲ့ ပြီး အသစ်မှာ ပြင်ရ၊သစ်ရတော့ မှာ
မဟုတ်လား။ အသစ်တွေနဲ့ပျော်ရတော့ မှာလေ။
ရွှေပြည်တော်ကြီးလဲ မှန်ကန် တဲ့တက်ကြွ လန်းဆန်း
တဲ့လမ်းကြောင်း ပေါ် ပြောင်းလဲနိူင်ပြီး ခုနှစ်ရက် သားသမီး
အပေါင်း အားလုံး အတိုင်း အဆမဲ့ပျော်ရွှင်နိူင်ကြ
အခက်အခဲတွေ ကြုံလည်း အောင်မြင်စွာ ဖြတ်သန်းရမှာပဲ မဟုတ်လား
ပို့ စ်လေးက ဘ၀အတွက် သက်တောင့်သက်သာ
ရှိတဲ့ ပို့ စ်လေး တစ်ခုပါဘဲ အစ်ကိုရေ . . . တန်ဖိုး
ရှိတဲ့ဘ၀ တွေးခေါ်မှုလေးတွေပါဘဲ . . . ကဗျာလေး
ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ်မင်္ဂလာလေး ဖြစ်ပါစေဗျာ . . .
ဆောင်းပါးလေး တော်တော်နှစ်သက် သဘောကျမိပါတယ်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်ကစ မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းပါစေ။
စာကောင်း၊ ကဗျာကောင်းလေးတွေ အများကြီးဆက်လက်ရေးနိုင်ပါစေ။
ဆောင်းပါးလေး က တကယ်ထိမိပါတယ် နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ.
အဟမ်း။ အစ်မဆိုဒ်မှာ ကူးယူခွင့်ပေးပါလားဟင်။ ဒီပိုစ့်လေးကို ကူးဖို့ ခွင့်တောင်းပါတယ်။ http://crystal-lovelivelife.blogspot.com
ဒါက အစ်မဆိုဒ်ရဲ့ လိပ်စာပါ။ ကျေးဇူးပါနော်။